America inoti haina chinangwa chekuchinja hurumende yemuZimbabwe asi kuti inoda chete kuti hurumende yeZanu PF itevedzere hutongi hwejekerere pamwe nekuremekedza kodzero dzemunhu wese ari munyika.
Vachitaura nerimwe bepanhau repadandemutande, mumwe mushandi mukuru kumuzinda weAmerica muZimbabwe, VaThomas Hastings, vakaramba mashoko ekuti America inoda kubvisa hurumende yeZanu PF vachiti chinongodiwa neAmerica chete runyararo muZimbabwe, hutongi hwejekerere pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzeveruzhinji.
VaHastings vakati kushaikwa kwehutongi hwejekerere nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kunopa kuti America ishushikane zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe.
VaHastings vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemadzisahwira avo pamwe nemakambani avnodyidzana nawo. VaHastings vakatiwo vose vakatemerwa zvirango ava vanoziva zvavanofanirwa kuita kuitira kuti hukama huripo pakati peZimbabwe neAmerica husimbaradzwe.
Vamwe mubato riri kutonga reZanu PF vanogaropomera America mhosva yekuda kubvisa hurumende yavo nechisimba vachitiwo inobatsira mapato anopikisa mukuedza kuzadzikisa izvi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mhinduro kuhurumende pamashoko aVa Hastings sezvo patafonera bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika tanzi titumire mibvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika, uye vari nhengo yeZanu PF, VaGadzira Chirumhanzu, vapokana nezvakataurwa naVaHastings vachiti munyika mune hutongi hwejekerere uye hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa iri kushanda kusimudzira mararamiro everuzhinji
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reYouth Platform for Development, VaOwen Dhliwayo, vanoti Zimbabwe haina hutongi hwejekerere vachipa muenzaniso wekusapatsanurika kwemasimba mumapazi akasiyana siyana ehurumende pamwe nekusashanda zvakaenzana kwemitemo.
VaDhliwayo vatiwo vanhu vakakurudzirwa kuti vachinje matongero avari kuita hazvina kufanana nekuti vari kuda kubviswa.
Vanotiwo hurumende inofanirwa kushanda zvakasimba zvikuri mukugadzirisa kutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe zvinoita kuti munyika musave nehutongi hwejekerere.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMarvelos Khumalo, vanoti vanowirirana naVaHastings kuti muZimbabwe hamuna hurongi hwejekerere.
Vanotiwo zvirango zvehupfumi hazvina kungoiswa pavanhu ava nemadzisahwira avo, asi kuti zvakaiswa mushure mekunge ana veZimbabwe varatidza kunyunyuta pamusoro pezviri kuitika munyika.
VaKhumalo vakurudzira hurumende yaVaMnangagwa kuti iite sarudzo dzakajeka pamwe nekuremekedza kodzero dzemunhu wese vachiti izvi zvinobatsira kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika zvakanaka.
Kunyange hazvo vakawanda muZanu PF vachiti America yakatemera Zimbabwe zvirango senzira yekuda kubvisa hurumende, zvirango zvakatemerwa vanhu vanosvika makumi masere nevashanu chete, uye makambani anodyidzana nevanhu ava anosvika makumi mashanu nemana.Akapedzisira kuiswa pazvirango neAmerica ndimuzvinabhizimisi VaKuda Tagwirei avo vanodyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe uye vari munhu ari pedyo zvakanyanya naVaMnangagwa.
Mumwe akapedzisira kuiswa pazvirango izvi igurukuta revasori, VaOwen Ncube.
America inoti hainganzi inoda kukonzeresa hurombo munyika iyo ichibatsira Zimbabwe kupedza hurombo munyika pamwe nekutsigira zvirongwa zvehutano zvakanangana nekurwisa zvirwere zvakasiyana siyana.